Home Wararka Booliiska Qardho oo xabsiga dhigay 13 askari oo ka tirsan Daraawiishta Puntland
Booliiska Qardho oo xabsiga dhigay 13 askari oo ka tirsan Daraawiishta Puntland
Booliiska magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka karkaar, ayaa xalay xabsiga dhigay 13 askari oo ka tirsan Ciidanka Daraawiishta Puntland, sida ay xaqiijiyeen saraakiil kala duwan. Askar ka tirsan Daraawiishta, ayaa xalay isku-dayay in ay xoog kula baxaan hub ku xeraysan xarunta Tababarka Ciidamada Xorgoble, balse Booliiska ayaa fashiliyay tallaabadaas.
Is-rasaasayn xooggan oo dhexmartay labada dhinac, lama soo werin wax khasaare ah oo ka dhashay, waxaana Amniga Xarunta la wareegay Booliiska oo kaashanaya ciidanka Madaxtooyada Qardho. 20 askari oo isku-daygaas ku eedaysan ayaa 13 kamid ah gacanta lagu dhigay, halka 7 kalena ay goobta isaga baxsadeen, sida ay Saraakiishu sheegtay.
Previous article[AKHRISO] Wasiir Jaamac oo u yeeray saraakiil looga shakisan yahay Afgambigii Farmaajo
Next articleShirka GWQ oo maalintii 4aad galaya & una muuqda inuu fashil ku soo dhamaanayo
[Daawo] MADAXWEYNE XASAN SHEEKH MAXAMUUD OO SHACABKA SOOMAALIYEED UGU HAMBALYEEYEY MAALINTA MIDNIMADA IYO XORNIMADA
Guddoonka BFS oo magacaabay guddiga dabagalka iyo xaqiiqa raadinta ee xisaab xirkii 4tii sano ee u dambeysay.
Jiheynta doodda Miisaaniyadda Dowladda Federaalka 2022
Guri ku yaal Muqdisho oo dab xoogan ka kacay
Sharif Sheekhuna Maye “Dadka ka danbeeya dibad baxyada gacan bir ah...